I-Regolith: Imvelo yedeskithophu yesimanje futhi esebenzayo ngokuya nge-i3wm | Kusuka kuLinux
I-Regolith: Imvelo yedeskithophu yesimanje futhi esebenzayo esebenza nge-i3wm
Namuhla, njengenjwayelo futhi ngezikhathi ezithile, sizobe sibuyekeza okukodwa kokuningi Izindawo zedeskithophu (ama-DE) ekhona. Ngalolu suku sizohlangana sikhulume ngomunye u-DE, omusha futhi no izici ezidonsa amehlo nezithakazelisayo, okuyigama I-Regolith.
I-Regolith njengoba «Imvelo Yedeskithophu», phakathi kwezinto eziningi ezithokozisayo elinakho futhi elingashiwo ngakho, ukuthi yakhiwe kusetshenziswa ukuxubana okuhle nokusebenzayo kwe I3wm neGnome. Ngaphezu kwalokho, iza ifakiwe ngokuzenzakalela, kufayela le- I-Linux Distro enegama elifanayo, kususelwa ku- Ubuntu, nokuthi ngubani owokugcina inguqulo eqinile yiyona 1.5.
Kodwa-ke, ngaphambi kokungena endabeni ye- I-Regolith, sikushiya ezinye izixhumanisi zezincwadi zethu zangaphambili ezihlobene nokwedlule Izindawo zedeskithophu, lapho benganwebisa khona ulwazi lwabo ngabo: UZiqu-zintathu, uMoksha, Imvelo ye-Deepin Desktop noma i-DDE, i-Pantheon, i-Budgie Desktop, I-GNOME, KDE Plasma, I-XFCE, I-Cinnamon, MATE, I-LXDE y I-LXQT.
I-Equinox Desktop Environment (EDE): I-DE encane futhi esheshayo ye-Linux
1 I-Regolith: WM I3wm + DE Gnome
1.1 Kuyini i-Regoliht?
I-Regolith: WM I3wm + DE Gnome
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni yeRegolith Project, ichazwa njenge:
"IRegolith yindawo yanamuhla yedeskithophu eyenzelwe ukuthi ukwazi ukusebenza ngokushesha ngokunciphisa imfucuza nemikhosi engadingekile. Kuthuthukiswe ngaphezulu kwe-Ubuntu, i-GNOME, ne-i3, iRegolith ihlala esisekelweni esigcineke kahle futhi esingaguquguquki".
Ngaphezu kwalokho, babhala ngokuningiliziwe okulandelayo izici nokusebenza okufanayo:
Imvelo yedeskithophu encane ene-interface yomsebenzisi esebenzayo, evumela ukuguqulwa okulula nokukhulisa, kuzinto zayo eziningi. Futhi konke ngenxa yokulinganisela okuhle kakhulu kokuxuba izici zokuphathwa kohlelo lwe-GNOME ngokuhamba komsebenzi okukhiqizayo kwe-i3-wm.
Indawo yokusebenza eguqulwe ukuze isetshenziswe kalula futhi ifundwe abasebenzisi abasha, ngenxa yesixhumi esibonakalayo sayo esisuselwe ku-Window Manager yohlobo lwe- "Tiling Window Manager".
Isibonisi sokuqhafaza okulula ukusenza ngokwezifiso futhi sithuthukise ngokucushwa okuhambisanayo kweXresource.
Ukuhlanganiswa okuhle kakhulu kwi-Linux Ubuntu Distro, okuvumela ukusetshenziswa kwe-App Store namaphakheji ayo wePhakheji. Noma kunjalo, ingafakwa ngokuzimela kwamanye ama-GNU / Linux Distros atholakala noma ahambisana ne-Ubuntu.
Intuthuko enhle futhi evumela ukuguqulwa okulula kwe-User Interface (UI) yayo, kanye nezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zezinqamuleli zekhibhodi ezakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho, inikezela ngeskripthi sokwakha kanye nemethadatha yephakeji, ekuvumela ukuthi uyifolhe kalula nokusabalalisa okukuqukethe.
Kusukela, eyakhe iwebhusayithi esemthethweni izilimi eziningi futhi iza ngokuphelele Ulimi lweSpanishi, ungafinyelela kalula konke okuqukethwe okubuyekeziwe kuzithombe-skrini (izithombe-skrini), imibhalo (imihlahlandlela / imanuwali), imithombo (ukulanda ngezinguqulo ezikhona), phakathi kolunye ulwazi olubalulekile.
Njengoba sishilo phambilini, I-Regolith iza ngokuzenzakalela kufayela le- Ubuntu-based Linux distro, noma kunjalo, kusuka ku- Izinqolobane kwiGitHub ingahlanganiswa kusetshenziswa umyalo debuild inikezwe iphakethe devscripts noma ngokusebenzisa kwabo Izindawo zokugcina ze-PPA ku-LaunchPad.
Ngecala lokugcina, futhi njengoba kushiwo kusixhumanisi, izinyathelo ezizolandelwa yilezi:
Mayelana Ubuntu kanye nokuphuma
Note: Ungafaka igama elithi "esitebeleni" esikhundleni se "khipha".
Mayelana ne-Debian kanye ne-derivatives
Dala ifayili lemithombo yesoftware (amakhosombe) bese ufaka umugqa wokuqukethwe olandelayo:
Note: Ungafaka igama elithi "groovy" esikhundleni se: focal, eoan ne-bionic, ngokuya ngokulula kwakho kanye / noma ngesidingo.
Yenza imiyalo elandelayo yomyalo:
Note: Qaphela ukuthi ungafaki okukhona ngaphambili noma i3wm ni i3wm-izikhalaUma kunesidingo susa konke ngaphambi kokufaka, ukugwema izinkinga ngenxa yezingxabano zokuncika noma abanye.
Futhi kuzo zombili lezi zimo, okungukuthi, usebenzisa Ubuntu kanye nokuphuma kokunye o I-Debian kanye ne-derivatives, futhi ungafaka noma yimaphi amanye amaphakheji akhona kulokho okugcinwe ukugcwalisa amaphakheji omdabu we I-Regolith.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Regolith», enye encane eyaziwayo, encane futhi esheshayo Imvelo yeDeskithophu (DE) ngokususelwa ku-I3wm naseGnome, okuza futhi ngokuzenzakalela, ku- I-GNU / Linux Distro okwakho kususelwa ku- Ubuntu, ngaphansi kwegama elifanayo I-Regolith Linux; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Regolith: Imvelo yedeskithophu yesimanje futhi esebenzayo esebenza nge-i3wm
Izicelo ze-KDE 20.12 sezivele zikhishiwe futhi lezi izindaba zazo